I-China New Technology Aroma Vitamin C Shower FIlter yoMvelisi kunye noMthengisi | Xinpaez
Itekhnoloji eNtsha yeVithamin C Shower FIlter
6 AROMA Amakha -Ukunceda uphumle umzimba wakho odiniweyo kunye noxinzelelo lwengqondo
UPHUCULO LOLUNTU NEENWELE - kuphucula ukuthambisa, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukwenza mhlophe kunye nokuqina kolusu
U-VITAMIN C otyebe kakhulu Isithako seVitamin esivela kwijithamini yejithamini siyakususa i-klorine eseleyo ye-99.9% kwaye ube nefuthe le-antioxidation kwaye unikeze i-vitamin kulusu lwakho
FILTER esebenzayo -Isusa umhlwa kunye nezinto eziyingozi kumanzi empompo ngokufanelekileyo
MOQ: Piece 50
Izinto zeShell: IPolycarbonate (PC)
Phawu: Ivumba leVitamin C
Ukuthetha ngesixhobo seFilitha seShell, Ukuthelekisa iPC kunye ne-ABS, iPC yeyona plastiki inganyangekiyo. I-PC yeyaplastiki yobunjineli ngexabiso eliphezulu, kodwa i-PC ineempawu zokugquma zombane kunye neepropathi zoomatshini, ngakumbi ukumelana nefuthe, ubungqongqo obuphezulu, uluhlu lobushushu obusebenzayo (-100 ～ 130 ℃) kunye nokwenza izinto elubala okuphezulu (okwaziwa ngokuba yi "Transparent metal"), ayiyityhefu, kulula ukuyilungisa kunye nokumila. Ayinakutshintsha kuphela ezinye izinyithi, kodwa kunye neglasi, ukhuni, njl njl.
Mhlophe ulusu lwakho
I-Vitamin C isetyenziswa kwisihluzo seshawa, kuba iyakwazi ukumelana nemitha ye-ultraviolet ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, iphucule imeko yamabala amnyama kunye namabala amdaka, ngenxa yoko inempembelelo emhlophe. Iimveliso zokhathalelo lolusu ezityebileyo ku-vitamin C zinokunceda ulusu luxhathise imitha ye-ultraviolet ehlotyeni, ukukhuthaza imetabolism yesikhumba, kunye nokuthintela amabala amnyama kunye namabala e-pigment. Ebusika, inokuphucula ukuba mfiliba kokuhamba kwegazi okungalunganga kulusu, ukuze ube mhlophe kwaye ukhazimle ebusika.
Emva kokuhlamba ngesicoci, ubuso bakho baziva butyibilika kwaye ulusu lwakho luziva ludlulile. Ukufuma kolusu kuya kwanda kakhulu emva kokusetyenziswa.
Icebo lokucoca ulwelo elinokutshintsha
1.Iqukethe i-vitamin C enkulu, i-45000mg, eyi-800 yamaxesha eelamuni '. Nje ukuba amanzi angene, aya kunika amandla amade ombala C. Ngokucacileyo Ukususa iklorini.
Isiphumo se-2 soxinzelelo sikunika ulusu olugudileyo, oluthambileyo kunye nolusu.
3. Nciphisa uxinzelelo kunye nokudinwa.
Ukususa i-chlorine kuyafuneka
I-chlorine eseleyo emanzini ompompo ikhutshwa ngokulula emoyeni ngexesha lokuhlamba kwaye ihlala kwigumbi lokuhlambela elingangeni moya. Ukuhlamba imizuzu elishumi kufana nokusela i-1L yamanzi. Inyani yile yokuba inani le-chlorine efunxwe emoyeni ngexesha lokuhlamba lingaphezulu kwelo lokusela.
Isebenza njani iVitamin C?
Yindlela yokungathathi cala. I-Vitamin C yikhemikhali enokuncitshiswa ngenxa yoko inokuthotywa kunye neklorine. I-Vitamin C inokunciphisa i-Cl2 ukuya kwi-Cl-, ene-oxidized kwi-oxidizing ivithamin C ngokwayo. Le mpendulo kufuneka yenziwe emanzini, kwaye umphumo awulunganga kwimeko eqinile.
Isiseko sokucoca ngaphakathi kwegobolondo sinokutshintshwa. Xa isiseko secebo lokucoca ulwelo sisetyenzisiwe, sifuna kuphela ukubuyisela umxholo wokucoca ulwelo. Ngandlela thile, sinokonga imali eninzi kunye namandla. Kufuneka siyibuyise kaninzi kangakanani? Ewe, kuyaxhomekeka. Ngokubanzi, into enye yokuhluza inokubonelela ngokuhlanjululwa kwamanzi angama-6000L, anokusetyenziselwa usapho lwabahlanu ukuhlamba kangangenyanga enye.
Lo mzekelo sisitya sethu esiphambili esiveliswa kumzi-mveliso wethu. Sinelebhile kodwa asiyincamathisanga. Kungenxa yokuba sinikezela nge-OEM kule, kubandakanya uluhlu olupheleleyo lokwenza ngokwezifiso. Sibonisa umzekelo, kwaye indawo eseleyo ishiyekile kwiingcinga zakho, ilogo, isihluzo kunye negobolondo, yonke into iyenzeka ngokwezifiso. Ukuba awunalo uluvo, sineqela lethu loyilo ukukucebisa, kunjalo nathi sinesitokhwe, nceda ufake iodolo ukuba uyafuna. Okwangoku sifumene izatifikethi zeMSDS kunye nezeSGS kule modeli ibonisa ngezantsi. Enkosi ngonyamezelo lwakho, njengoko ufikile apha. ^ ^
I-Rose, iLavender, iLemon, iMint,
Egqithileyo Ihotele eNtofontofo yokuHlamba yeCarbon yeFibre
Okulandelayo: Itekhnoloji eNtsha yeTheriki yodongwe yentloko yeshawari ephethwe ngesandla
Icebo lokucoca ulwelo olunamanzi amnandi
Isihluzo sentloko yeshawari
isihluzo samanzi eshawa
Isihluzi seVitamin C yeshawari
Itekhnoloji entsha yoxinzelelo oluphezulu lokucoca ngesandla
Ihotele eNtofontofo yokuHlamba yeCarbon yeFibre
Imfashini iNtloko yokuGcina amanzi eSandleni
I-cartridge yokucoca i-cartridge ye-OEM ye-Vitamin C
I-Chrome ivuliwe / icinyiwe yitshintsha iNtloko yokuThoba imvula
Uxinzelelo oluphezulu lokuhlamba intloko- i-Chrome